Lammaane Bandhigashada Xiriirkiisa Jaceyl Keliya Kaga Baxday 31,500$ & 25 iPhone X Oo Lagu Xardhay Goobta Jaceylka Lagu Soo Bandhiganayey (CAJIIB)
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Wednesday, 08 Nov 2017 15:00 PM / No Comments
Dhacdadaan ayaa noqotay mid aad u hadal heyn badan sababtoo ah wiil ayaa sameyey cod jaceyl midkii ugu yaabka badnaa kadib markii gabadhii uu jeclaa horkeenay goob cajiib ah si uu jaceylkiisa ugu soo bandhigto.
Chen Ming waa wiil aad ugu takhasusay Cilmiga IT , waxaana uu sameeyaa ama uu nashqadeeyaa Muuqaalada Ciyaar Gacmeedka(GAME), waxaana uu deegaan ahaan ku nool yahay Shenzen, China.
Si uu umuujiyo jaceylka uu u qabo gabadha uu ka helay waxaa uu sameeyey arin ilaa iyo hada laga yaaban yahay.
Chen Ming ayaa soo iibiyey 25 Mobile oo iPhone X , Mobile-daas waxaa loo sameeyey qaab calaamada jaceylka(LOVE),waxaa lagu xardhay ubaxyo casaan ah , sidoo kale saaxibada gabadhaas ayaa lasiiyey mid walba Mobile iPhone X.
Qiimo ahaan Mobile –ka iPhone X oo caalamka markii ugu horeeysey lagu baahiyey ay ahayd 3 bishaan November ayaa qiimahiisa gaaraya hada 1,145$ , taas oo ka dhigan in lacag badan ku baxday bandhigashada jaceylkaas.
Shaki la’aan gabadha loo sameeya sidaan ayaan dood ka keenidoonin haddii guur laga dalbado , sababtoo ah shan maalmood Mobile aduunka saaran ayaa laga dhigay codsiga jaceylkeeda.
Sidoo kale sababta uu wiilkaan Chinas-ka sidaas u sameeyey ayaa ah inuu muujiyo in gabadhaan xagiisa aysan ka ahayn ciyaar ciyaar waxaa uu ka balanqaaday wax walba inuu u sameyndoono.
Sheekada marka la sameeynayey looma sheegin gabadha oo lagu macagaabo Lee , balse waxaa si kedis ah halmar loogu sheegay inuu jiro qof u baahan inuu la kulmo , waxaa si kedis ah loo dhex dhigay qolka lagu xardhay ubaxyada casaanka ah iyo Mobile-daan.
Laakiin waxaa jirta sheeko kale oo aadan lasocon aqristoow oo ah in Chen Ming iyo saaxiibtiisa ay aad u jecel yihiin ciyaar gacmeedka isagane waa nashqadeeya muuqaalada Game-ka, mida kale sababta Mobile-da looga dhigay 25 xabo , waa da’da gabadha maxaa yeelay Lee waa 25 sano jir.
Guud ahaan badhigashada xiriirkaan jaceyl waxaa ku baxday qarash badan , sababtoo ah halka Mobile waa 8,388 oo lacag China ah (yuan), guud ahaa waa 210,000 (yuan) una dhiganta ($31,500) waa Soddon iyo kow kun iyo shan boqol oo dollar.